Munaasabad uu xilka ku wareejinayo David Cameron oo ka socota London(Sawiro) | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Munaasabad uu xilka ku wareejinayo David Cameron oo ka socota London(Sawiro)
Munaasabad uu xilka ku wareejinayo David Cameron oo ka socota London(Sawiro)
Ra’iisal wasaaraha Britain David Cameron ayaa munaasabad kooban oo ka dhacday aqalka 10 downing Street ayaa waxa uu halkaa ka jeediyay qudbadii ugu dambeysay ee mudada uu xilka ka hayay dalkiisa.
David Cameron ayaa sheegay in xilka uu hayay ay ahayd tii ugu sharafta badneyd ee weligii soo martay. Iyadoo ay goobjoog ahaayeen xaaskiisa iyo carruurtiisa ayuu Cameron ku tilmaamay xilka uu hayay mid aan sahlanayn.
David Cameron ayaa u baqoolay hadal gaaban ka dib aqalka boqortoyada Buckingham Palace halkaa oo uu si rasmi ah ugu gudbinayo is casilaadiisa, waxayna boqorada Ingiriiska si rasmi ah ugu magacaabi doontaa Theresa May.
Ra’iisal Wasaare Cameron ayaa shaqada ka tagaya ka dib markii ay Britain ay u codaysay inay ka baxdo Midowga Yurub. David Cameron ayaa sii wadi doona shaqadiisa xildhibaanimo ee baarlamaanka Britain. Theresa May oo badalaysa ayaa balanqaaday inay hirgaliso go’aanka Britain ka bixida Midowga Yurub.